GPS Arduino: goobta iyo meeleynta mashaariicdaada | Qalabka bilaashka ah
GPS Arduino: goobta iyo meeleynta
Iyada oo la guddiga horumarinta Arduino wuxuu fulin karaa mashaariic fara badan, xadka inta badan waa mala awaal. Iyada oo qaybaha elektiroonigga ah iyo, hawlo shaqo ayaa lagu dari karaa si aad waxyaabo badan u qaban karto. Mid ka mid ah shaqooyinkaas ayaa laga yaabaa inay tahay awood u leh hel shey ama dad, ama hel adigoo la jaan qaadaya Arduino GPS.
Noocan ah meelaynta iyo baafinta waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la adeegsanayo RFID ama qaateyaal sida kan aan uga hadli doonno qodobkaan. Tan waxaad awoodi doontaa inaad ku abuurto mashaariic fara badan, laga bilaabo ciyaaraha oo aad ku abuuri karto baare oo aad ku heli karto walxaha, si aad u hesho waxyaabaha la soo xaday, si aad u awoodo inaad iskaa u hesho adoo isticmaalaya GPS, iwm
1.1 Halkee looga iibsadaa NEO-6 loogu talagalay Arduino GPS
2 Tusaale ahaan Arduino
Si aad uhesho Arduino GPS, waad isticmaali kartaa Qalabka NEO-6, Qoys ay soo saartay U-Blox taasina waxay ku xirnaan kartaa guddiga Arduino qaab fudud. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin xiriir isgaarsiineed oo dhameystiran, oo leh UART, SPI, I2C, iyo USB, marka lagu daro taageerida nidaamka NMEA, UBX binary iyo RTCM.
Intaa waxaa dheer, GPS-kaan Arduino ee leh NEO-6 sidoo kale wuxuu kuu ogolaanayaa inaad yareyso cabirka mashruucaaga, maadaama ay leedahay cabir yar, iyo waliba qiimo jaban. Marka la eego isticmaalka, sidoo kale way yar tahay. Markaad ku jirto qaab firfircoon, waxay u baahan doontaa oo keliya 37mA. Waxaa ku shaqeeya 2.7 ilaa 3.6V oo loogu talagalay moodooyinka NEO-6Q iyo NEO-6M, halka ay jiraan kuwo kale oo danab hoose ah oo la yiraahdo NEO-6G oo kaliya u baahan inta u dhexeysa 1.75 iyo 2v.
Hadday ku dhex jiraan module ah, waxaa ku jiri doona a jaangooyaha danab taas oo u oggolaan doonta inay si toos ah uga xoogsato xiriirka Arduino 5v.
Mawduucyada kale ee xiisaha leh ee qaybtani waa:
30ka ilbiriqsi ee waqtiga dabka qabow, oo kaliya 1 ilbiriqsi bilowga kulul.
La inta jeer ee cabirka waxay ku shaqeeyaan kaliya 5Hz.
Saxnaanta booska oo ah 2.5 mitir oo kala duwanaansho ah.
Saxnaanta xawaaraha 0.1 m / s.
Kala duwanaanta hanuuninta kaliya 0.5º.
Halkee looga iibsadaa NEO-6 loogu talagalay Arduino GPS
Waxaad ka heli kartaa qalabkan iyo modulladooda dukaamo elektaroonig ah oo badan oo khaas ah, ama sidoo kale Amazon. Tusaale ahaan, halkan waad awoodi kartaa ku iibso qiimo aad u jaban:
Lorsoul NEO-6M Arduino moduleka GPS
Tusaale ahaan Arduino
Waxaad ku baran kartaa waxyaabo badan oo ku saabsan barnaamijka Arduino adigoo koorsada bilaashka ah ee 'PDF' ah ee aad awoodid halkan kala soo bax.
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso si aad ugu xirto guddigaaga horumarinta oo aad u hesho GPS-kaaga Arduino waa inaad ku xirto modulekaaga NEO-6 guddiga. Ku xiriirada waxaa loo sameeyaa si fudud (NEO-6 isku xirnaanta moduleka - isku xirnaanta Arduino):
Markaad isku xirto, waxaad sidoo kale yeelan doontaa inaad soo dejiso Maktabada SoftSerial gudaha ID-gaaga 'Arduino IDE', maxaa yeelay waxaa looga baahan doonaa isgaarsiinta taxanaha ah. Waxay u badan tahay inaad horey uga heshay mashruucyada kale, laakiin haddii kale, waa inaad yeelataa soo dejiso oo rakib gudaha IDE-gaaga.
Marka taas la dhammeeyo, waxaad ku bilaabi kartaa lambarkaaga fudud si aad u akhriso. Tusaale ahaan, maadaama dhowr borotokol la isticmaali karo, halkan waa sawirka loogu talagalay NMEA:
Dabcan, waad sameyn kartaa wax ka beddelkaaga ama waxaad isticmaali kartaa borotokoollo kale haddii aad rabto ... Sidoo kale waad u isticmaali kartaa tusaalooyinka laga heli karo IDE-gaaga maktabaddaan. Laakiin, ka hor intaadan dhammayn maqaalka, waa inaad ogaataa taas qaabka NMEA (Asociation National Marine Electronics Asociation) waa mid aad u qaas ah, si aad u fahanto, waa inaad ogaataa iskuxirka:
Taasi waa, $ GPRMC waxaa ku xiga taxane ah beegyada tilmaamaya goobta:
hmmss.ss: waa waqtiga UTC saacado, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo.
A: heerka aqbalana, halka A = OK iyo V = digniinta.
llll.ll, ilaa: waa loolka, halka a uu noqon karo N ama S, waqooyi ama koonfur.
yyyy.yy, a: waa dhererka. Haddana a wuxuu noqon karaa E ama W, taas oo ah, bari ama galbeed.
vv: xawaaraha guntimaha.
xx: waa koorsada darajooyinka.
ddmmyy: waa taariikhda UTC, maalmo, bilo iyo sannad.
mm, a: waa kala duwanaanshaha magnetic ee darajooyinka, a-na wuxuu noqon karaa E ama W bari ama galbeed.
* H H: Checksum ama jeegga.
Tusaale ahaan, waxaad heli kartaa wax sidan oo kale ah:
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » GPS Arduino: goobta iyo meeleynta
eProcessor: processor-kii ugu horreeyay ee isha furan ee Yurub waxaa laga abuuray Spain
LibreCellular: waa qalab bilaash ah oo ah qalab iyo softiweer si loo abuuro shabakad mobiil kuu gaar ah